कीर्तिपुरवासीलाई कस्तो लाग्दैछ चुनाव ?- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
'त्रिवि काखैमा छ, तर हामीले लाभ उठाउन सकेका छैनौं'
वैशाख २६, २०७९ रीना मोक्तान, बुनु थारु
काठमाडौँ — मेलम्चीको पानीले कीर्तिपुरवासी अस्तव्यस्त देखिन्छन् । खबर नगरि आएको मेलम्चीलाई संगालेर राख्न कीर्तिपुरवासी हतारिँदैछन् । कतिका अनुहारमा खुसीले उज्यालो देखिन्छ भने कसैलाई खासै उत्साह छैन। हप्ताको २ पटक मात्र पानी आउने कीर्तिपुरमा यसरी मेलम्ची उर्लिएपछि ‍पानी जोगाउने चक्करमा कीर्तिपुरवासीले आकाशबाट झरेको पानीलाई पनि बेवास्ता गरेका छन् ।
ट्यांकी, घरका गाग्री, ग्यालिन भर्न सबैलाई भ्याइनभ्याइ छ । दृश्य हेर्दा लाग्छ, कीर्तिपुरवासीमा कसले धेरै पानी जम्मा गर्ने ? भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । जसरी कीर्तिपुरका उम्मेदवारलाई वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याउने चर्को होडबाजी चलेको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेका केश रत्न बज्राचार्य, नेपाली कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी र नेकपा माओवादी केन्द्रका शिव शरण महर्जन एक्ला-एक्लै भिड्न तयार छन् । वडास्तरमा सत्तारुढ दलको चुनावी गठबन्धन भयो । तर प्रमुख र उपप्रमुखमा भने सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा खासै मिलेमतो हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस र जसपाबीच मात्रै तालमेल भयो । एमाले र माओवादी कांग्रेस र जसपाको गठबन्धसँग एक्लै भिडिरहेका छन् ।
छेउको बाटोदेखि घरसम्म पानी लैजाने सुरसारमा रहेछन् वडा १, देवपोखरीका ४२ वर्षीय भीमबहादुर महर्जन । बाटोदेखि घरको दूरी २५ मिटर । घरसम्म पानी पुर्‍याउन पाइपको आवश्यकता थियो । आफूसँग भएको पाइपले घरसम्म धेरै पानी नपुर्‍याउने भएपछि कसो गरौं, के गरौंको भावमा बाटैमा उभिएका थिए महर्जन । 'तपाईंलाई चुनाव लागेको छैन ?' हामीले प्रश्न राख्यौं । प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ दिए, 'हामीलाई कहाँ चुनाव लाग्छ ? अहिले मेलम्ची लागेको छ । अब यहाँ पानीको धेरै समस्या छ । फेरि मेलम्ची कहिले आउँछ पनि ठेगान हुँदैन ।'
कीर्तिपुरमा खानेपानीको समस्या पूरानै हो । हप्तामा २ पटक आउने पानीमै कीर्तिपुरवासी भर पर्छन् । आक्कलझुक्कल आउने मेलम्चीको भर हुँदैन । वडा १ मा बस्दै आएका महर्जन आगामी स्थानीय निर्वाचन जित्नेले खानेपानीको यो समस्यालाई समाधान गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन् । उनी मात्र होइन, अधिकांश कीर्तिपुरवासीकै माग यही छ । 'हुन त पुराना उम्मेदवारले कीर्तिपुरवासीको समस्या समाधान गरिदिएकै जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय हरेक टोलमा बाटोमा ढुंगा छाप्ने काम भयो । कहीँ पोखरी बनिरहेको छ । अब नयाँ आउनेले पनि राम्रो काम गरोस्,'महर्जनले भने, 'तर, यतिका वर्षदेखि भोट हाल्दै आएको छु, अहिलेसम्म खासै कसैले राम्रो काम गरेको छैन । अब जित्नेले राम्रो काम गरोस् जनताको समस्या बुझिदिओस्।'
मेलम्चीका कारण भीमबहादुरलाई बोल्ने फुर्सद दिएन । देवपोखरीकै श्याम राजभण्डारीले भने सही व्यक्तिलाई मात्र भोट दिने बताए । ४१ वर्षीय राजभण्डारी भन्छन्, ‘पार्टी पौवा, पोखरी बनाएका छन् । राम्रो बनेको छ । काम त गरेका छन् नेताहरुले । निरन्तरता दिनुपर्छ ।कीर्तिपुरवासी खुसी नै छौँ ।’
त्यतिकैमा पाटीमा एक्लै झोक्राइरहेका थिए पानबहादुर महर्जन । पाटीमा एउटा समूह तास खेल्दै थियो । उनी घरि तास खेलेतिर ध्यान दिन्थे, कहिले टोलाउँथे । वडा १० का पानबहादुरले १६ वर्षको उमेरदेखि नै मतदान गर्दै आएका छन् । अहिले उनी ८३ वर्षका भए । 'तपाईंको वडामा उठेको उम्मेदवारको नाम थाहा छ ?' हामीले कुराकानी प्रश्नबाट सुरु गर्‍यौं । उनले झट्ट जवाफ दिए, 'खोइ नाम नै याद हुँदैन ।'
'भोट त हाल्नुहुन्छ होला नि ?'
लरबरिएको आवाजमा उनले भने, 'पाँच-पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने हो । जसले राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई भोट दिन्छु । रुखमा हाल्यो भने नेकपा एमाले रिसाउँछ । राम्रो काम गर्नेलाई भोट दिन्छु । आफ्नो मनमा जो छ त्यसलाई भोट हाल्छु नि ।' छेउमै रहेका उनका साथी जोगमान महर्जनले भने वर्षौंदेखि आफूले भोट दिएको उम्मेदवारले जितिसकेपछि चुनावमा गरेको बाचा बिर्सने गरेको बताए । 'कुनैले काम गरिदिन्छन्, कतिले गरिदिँदैनन् । अब कसले जित्छ भन्ने कुरा पनि चुनावअगाडि केही थाहै हुँदैन । अहिले चुनावमा यस्तो गर्छु भन्नेहरुले जितेपछि सबै वाचा बिर्सन्छन्,' खोक्दै बोलेका जोगमानले आफ्नो विचार राखे ।
उम्मेदवार र दलहरुलाई चुनावको चटारो भए पनि कीर्तिपुरवासीलाई खासै चुनावले छोसकेको छैन । उनीहरु हिजोजस्तो देखिन्थे आज उस्तै छन् । उनीहरुका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । चुनावले कीर्तिपुरको मुहार भने फेरिदिएको छ । अधिकांश घर पार्टीका झन्डाले रंगिएका छन् । टोलटोलमा उम्मेदवारका तस्वीरसहितका ब्यानर । घरको दैलोमै आइपुग्छन् उम्मेदवार । ‍पार्टीका प्रचार टोली बिहानै टोलवासीलाई चुनावी गीत, नाराले उठाउन आउँछन् । यस्तो चुनाव प्रचारसँग दिक्क सबिता महर्जनलाई पनि उम्मेदवारले देखाउने सपनामा विश्वास छैन । 'यस्तै हो, विकास गर्छु त भन्छन् तर गर्दैनन् । उम्मेदवारहरुलाई चुनावको बेलामा मात्र देख्न पाइन्छ । त्यसैले मलाई त भोट हाल्न मन लाग्दैन,' टोपी सिउँदै गरेकी सबिताले सुनाइन्, 'अब जितेर जाने उम्मेदवारले बाटोघाटो बनाइदिओस् । धारा, पानीको सुविधा बनोस् । यहाँ पानीको समस्या छ । पानी हरेक दिन आइदिओस् ।'
सबिता १२ जनाको परिवारमा बस्छिन् । एक्ला-एक्लै मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा उनीहरुले नियालिरहेका छन् । भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई 'भोट तपाईंलाई नै' भन्दै फर्काइदिन्छिन् । 'भोट त हाल्नैपर्छ । हाल्न गएन भने बोलाउन आउँछन् । तीन जना उम्मेदवारमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । महिलाका हिसाबले संगीताले जितोस् भन्ने पनि लाग्छ,' सबिताले भनिन् ।
घुम्दै जाँदा वडा नं १० पुग्यौं । घरका भित्ताहरुमा कोरिएका नेवारी सँस्कृति झल्किने चित्रहरु । पुन: ठडिएका रहेछन् भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घरहरु । कुँदिएका झ्याल, ढोका र प्राचीन दरबारको झल्को दिने इँटाले बनेका घरले कीर्तिपुरको साँस्कृतिक पाटो जोगाइरहेको देखिन्थ्यो । पोखरी अनि ढुंगेधाराका पुन:निर्माणले कीर्तिपुरको सौन्दर्य बढाइदिएको छ । नवनिर्मित पार्टीमा साथिहरुसँग गफिँदै गरेका त:ननिका ६६ वर्षीय कृष्ण श्रेष्ठ भेटिए । जनप्रतिनिधिहरुले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई नि:शुल्क उपचार तथा औषधिको व्यवस्था गर्दिनुपर्ने उनको माग छ । 'बिरामी भएको मान्छेलाई नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ । अनि शिक्षा पनि नि:शुल्क दिनुपर्छ । काम गर्ने अनि जनतालाई सुविधा दिने नेतालाई हामी भोट हाल्छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
कीर्तिपुर वडा नं १० नयाँबजारकी गंगादेवी महर्जनलाई पनि चुनाव लागिसकेको रहेछ । उनी आफ्नी साथीकी छोरीलाई वडा सदस्यमा जिताउन प्रचार–प्रसारमा लागेकी छन् । बाघरभैरव मन्दिर परिसरमा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको झण्डा र पम्पलेटसहित भेटिइन् । उनले कुन पार्टीको जनप्रतिनिधि राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि आफ्नो नजिककोलाई सहयोग गरेको बताइन् ।
कीर्तिपुरका सामाजिक अभियान्ता भरत महर्जनका अनुसार ५ वर्षअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको ध्यानाकर्षण गर्न र मन जित्न फल्चामा लगानी गरे पनि यसमा जीवन्तता नभरेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सम्पदामा बढी आकर्षण हुन्छ ।त्यसैले पनि यसमा बढी जोड दिए जनप्रतिनिधिहरुले । फल्चाको प्राण भनेको भजन प्रथा हो । साँस्कृति क्रियाकलाप जस्तै भैरव मास्क प्रदर्शन, समयबजी बाँड्ने, भजन गाउनाले फल्चाले प्राण भर्छ ।भविष्यमा कुनै खास फल्चालाई केन्द्रित गरेर युवाहरुको गुठी निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सिकाउनुपर्छ ।’
उनले अलपत्र परेको अवस्थामा रहेको युद्ध स्मारक पार्क पनि पूरा गर्नुपर्ने भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या सल्टाउन पनि अबको चुनिने जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र ६५०० रोपनी जग्गामा त्रिवि फैलिएको छ। शैक्षिक केन्द्रको रुपमा कीर्तिपुर चिनिए पनि आफ्नै काखमा भएको त्रिविबाट कीर्तिपुरवासीहरुले शैक्षिक तथा आर्थिक लाभहरु उठाउन भने सकेका छैनन् । त्रिविले गर्दा कीर्तिपुर रिंङरोडसँग नजोडिएको र पिछडिएको जस्तो मनोविज्ञान कीर्तिपुरवासीमा छ । २०१६ सालमा गरिएको ६५०० जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा करिब आधा जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले पाएका छैनन् । कतिपय परिवारहरु सुकुमबासी जस्तै बाँचिरहेका छन् । यसको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ २०:४२
पुस २८, २०७७ रीना मोक्तान, बुनु थारु
काठमाडौँ — कोरोना कहरसँगै सुरु भएको ‘वर्क फ्रम होम’ ले हामी आजित थियौँ । काम, लकडाउन अनि परीक्षामै ध्यान केन्द्रित भयो । घुम्ने योजना योजनामै सीमित भयो । परीक्षा सकिनेबित्तिकै हामीले घुम्ने जाने निधो गर्‍यौं ।
पुस २३ मा घुम्न जाने पक्का गर्‍यौं । घुम्न त जाने तर कहाँ जाने ? छोटो समयमा पुगिने र 'हाइकिङ' गर्न पनि मिल्ने ठाउँको खोजीमा थियौँ । युट्युबमा राखिएका ‘घुमन्तेहरु’ हरुको भ्लग र साथीभाइको सल्लाह अनुरुप हामीले रोज्यौं, बेथानचोक । त्यहाँ पुगिसकेका साथीहरुले सूर्योदयको दृश्य सुनाउँदा कतिबेला पुगौं झैँ भयो । तर हाइकिङको समयले मन आत्तियो, सूर्योदय नछुटाउन मध्यरातमै हिँड्नुपर्ने रहेछ । कोही भन्थे, 'हिँड्नुपर्छ ८ घण्टा !'
हामीसँग लामो हाइकिङको अनुभव थिएन । 'ट्रेकिङको अनुभव नहुने रातको २ बजे नै हिँड्नुपर्छ ।' यस्तै कुराले हाम्रा आँखा अन्य क्षेत्र हेर्नतिर घुमे । तर उपत्यका छेउका सबै क्षेत्र फन्को मारेपछि दुवैको मन अडियो बेथान चोकमै । नजिक पनि अनि सस्तो पनि । त्यसपछि अडान लियौं,'आखिर हामीले खोजेको हाइक हो । सकिन्छ, बेजोडले हिँडौंला ।'
अघिल्लो दिन नै बेथानचोक नारायण पुगेर टेन्टमा बस्ने उपाय नसोचेका होइनौं । चिसोले बस्न सकिन्न भन्ने स्थानीयको सल्लाहले हामी हाइकका लागि तयार भयौं । 'सानो चक्कु पनि बोक्नु, हाइकमा केहि पर्‍यो भने ?' मध्यरातमै हिँड्नु पर्ने भय एकजनाको मुखबाट फुत्कियो । घरमा चक्कु नभेटेपछि सानो कैंची ब्यागमा घुसारेँ । आवश्यक सामग्री(औषधि, ब्यान्डेज, मुभ, गुलकोज र केही ड्राइ फुड) ब्यागमा प्याक गर्‍यौं । साथै प्याक गर्‍यौं केहि साहसिक र रमाइलो अनुभव बटुल्ने साहस ।
बिदा लिएर अफिसबाट निस्कनै लाग्दा सहकर्मीहरुले ठट्यौली शैलीमा भने,'सनराइज होइन सनडाउनसम्म पुग्छौं तिमी दुई ।' त्यसपछि सनराइज हेर्नैपर्छ भन्ने जोश थपियो । माइतीघरबाट साढे एक बजेतिर पनौतीको गाडी चढ्यौँ । मन भने बेथानचोक घुम्न हिँडिसकेको थियो । कतिबेला उठेर हिँड्ने, कति घण्टा सुत्ने अथवा नसुत्ने यस्तै/यस्तै योजना बुन्दै पनौती पुग्यौं । काम गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि यसअघि दुईजना हामी यसरी कहिल्यै घुम्न गएका थिएनौं । ‘वर्क एनिभर्सरी’ सेलिब्रेट गर्ने राम्रो बहाना बनिरहेको थियो हाम्रो घुमघाम ।
करिब साढे ३ मा हामी पनौती बसपार्क पुग्यौं । ढुंगखर्क जाने बस साढे ४ बजेमात्र हिँड्ने जानकारी पाएपछि खाजा खाने नधो गर्यौं । यात्राका लागि छुट्दै गर्दा बेथानचोकमा खेलपत्रकार प्रकाश तिमिल्सिनाको घर पर्ने कुरा न्यूजरुमै सुनेका थियौं । हामीले नम्बर खोजेर उहाँलाई फोन घुमायौं । अर्गानिक रिसोर्टबाट स्वागतसहितको फोनको घण्टी बज्यो । कोही नजिकका आफन्त भेटिए झैं यता ढुङ्खर्क छुट्ने बसपार्कमा हामी ढुक्क भयौं । पहिलै सम्पर्क भएको होमस्टे क्यान्सिल गर्‍यौं ।
ढुङ्खर्कको गाडीभित्र बसेर गफिन थाल्यौं । काम, पढाइका प्रेसर छोडेर नयाँ गन्तव्यका लागि हिँडेका हामीलाई यात्रामा भेटिने सबै कुरा रमाइलो लाग्दै थियो । 'त्रिशूलीको कान्छी बदाम, खानुस् मिठो छ,' भन्दै डालो बोकेका एकजना भाइ नजिकै उभियो । गहुगोरो वर्ण, कैला आँखाका ती भाइ हरेक यात्रीको छेउमा पुगेर दोहोर्‍याउँथ्यो,'त्रिशूलीको कान्छी बदाम खानुस् । कान्छी बदाम मिठ्ठो हुन्छ ।' छेउमै भएका अर्का यात्रीले ठट्टा गर्दै भने,'जेठी बदाम चाहिँ छैन '? माहोल हाँसोमय बन्यो । भाइ मुसुक्क हाँसे मात्रै ।
भनेकै समयमा गाढी नगुड्दा हामीलाई भने अत्यास लाग्यो । सायद गन्तव्य पुग्ने हतारो थियो त्यो । भाइ ढुङ्खर्क जाने यात्रीलाई बदाम बेच्थ्यो । गज्जब त के भने उनका बुवा गाडीकै छेउमा चटपटेको गाडा अड्याएर ढुङ्खर्कका यात्रीलाई चटपटे बनाएर खुवाउँथे । उनकी आमा गाडी छुटिने चोकमै बदाम बेच्दी रहिछिन् । यो व्यवसायिक परिवार लकडाउनभरी कसरी बाँचे होला ? प्रश्न मनमा उब्जियो ।
त्यतिकैमा गाडी पनि ढुङखर्कतिर हुँइकियो । गाडीमा थारु गीत बजिरहेको थियो । पाटीखर्कमा पहेलैं लटरम्म फलेका सुन्तलाको बोट अनि पातलो बस्ती नाघेर गाडी अगाडि गुड्न थाल्यो । धुलोलेप हामीलाई नचिन्ने बनायो । साढे १ घण्टाको यात्रापछि हामी ढुङखर्क पुग्यौं । रिसोर्टदेखि एकजना दाइ बाइक लिएर ढुङ्खर्क बसपार्क आइपुगे । बाटो उकालो थियो । एक बाइकमा ३ जना सवार हामी खाल्डाखुल्डीमा झन्डै लडेनौँ । १५ मिनेटको यात्रा दिनभरको भन्दा रोमाञ्चक बन्यो । कारण हामी बेथानचोकको रिसोर्ट पुग्यौं ।
डर र साहसको त्यो १ घण्टा
खानापछि भोलिको हाइकका विषयमा रिसोर्टका दाजुहरुसँग लामो छलफल भयो । राति वनमा केही जंगली जनावर त आउँदैन नि ? प्रश्न राख्न नपाउँदै रिसोर्टका दाइले भने,'अँ, चितुवा, भालु, बाँदर त आइरहन्छ ।' २ बजे नै उठेर हाइक गर्ने हाम्रो साहसिक निर्णय दाइको कुराले डगमगायो । तर सनराइज हेरेरै छाड्ने निर्णय मनमनै दोहोर्‍यायौं । त्यसैले डरबीच पनि हाइक गरेर जाने कुरा गर्‍यौं । त्यतिकैमा रिसोर्टका दाइले नै बाइक पुग्ने बाटोसम्म पुर्‍याइदिने कुरा राखे । १ बजे नै उठेर अपरिचित जंगलमा हिँड्ने योजना बनाएका हामीलाई दाइको प्रस्तावले राहत दियो ।
बेथान चोक जाने उत्साहले निदाउन सकिरहेका थिएनौं । बाइक पुग्ने ठाउँपछि १ घण्टा हिँड्नु थियो । जबरजस्ती निदायौं । आँखा फोनको अलार्मले ठिक्क चार बजे खुल्यो । दुई दाइ बाइकमा तयार थिए । अनि सुरु भयो उकालो यात्रा । ४:३० बजे आकाशमा ताराहरु बलिरहेको थियो । तर जंगलको बाटो अध्याँरो । चिसो उतिकै । कच्ची सडक । त्यहीमाथि उकालो बाटो । बाइक हरेक घुम्तीबाट उकालो लाग्दा अब सुइँकिने भो' तलतिर भन्ने हुन्थ्यो । उकालो लाग्दै जाँदा बाइक पनि नचढ्ने । बाइकबाट ओर्लिने ढकेल्ने क्रम चलिरह्यो । जङ्गलको यात्रामा जुनको उज्यालो निकै मनमोहक थियो । सनराइजको दृश्य मनमा घुमिरह्यो । करिब १ घण्टाको यात्रापछि हामीलाई बेथान चोक जाने म्याप सरसर्ती भनेर फर्के दाइहरु ।
त्यहाँबाट स्थानीयलाई बेथानचोक नारायणथान पुग्न ४५ मिनेट लाग्ने रहेछ । हामीलाई पक्का १ घण्टा । 'परको डाँडामा दुइवटा सोलारको बत्ती बलेको छ नि । त्यही हो पुग्नुपर्ने । बाटो नछोडी जानु । दायाँ नलाग्नु । एक ठाउँमा बाटो होइन कि भन्ने ठाउँ आउँछ । तर त्यसैबाट अगाडि बढ्नु,' दाइहरुले तल ‌ओरालो लाग्ने सिमेन्टको भर्‍याङ देखाउँदै भनेका थिए ।
टाउकोमा हेडलाइट राखियो । धन्न हेड लाइटको उज्यालो परसम्म देखिने रहेछ । सुनसान जंगल । निस्पट्ट अँध्यारो । अगाडिको दुईवटा बत्ती हेर्यौं । अब पर्‍यो फसाद । भर्‍याङ उक्लँदै गर्दा कैँची याद आयो । लामो बाटो हिँड्नु नपर्ने भएपछि रिसोर्टमा छोडी आएको कैँची दिमागभरी घुमिरह्‍यो । तर एकअर्कासँग नडराए झैं गरी हामीले बेथानथोक नारायणथानको बाटो हिँड्न सुरु गर्‍यौं ।
बत्तीले पाइला राख्न मिल्ने बाटो देखाउँथ्यो, अरु सबै कालै । अँध्यारो रातमा जंगलको बाटो हिँडिरहँदा मनमा अनेक कुरा खेले । अगाडि बढिरह्यौं । उज्यालोमा ढुक्क हुने मन अँध्यारोमा त्यतिकै डराउँदो रहेछ । अँध्यारोमा जे पनि अँध्यारै देखिने । त्यहीमाथि अँध्यारोमा देखिने फरक/फरक आकृति । बाटैमा पनि कोही ढुकिरहेको जस्तो छायाँ देखिने ।
जंगली जनावर आइहाले हातमा बोकेको सेल्फी स्टिकले डिफन्ड गर्ने कुरा गर्दै साहसिक भइ टोपल्दै अगाडि बढिरह्यौँ। त्यतिकैमा दोबाटोजस्तै देखिने ठाउँ आइपुग्यो । दायाँतिर लाग्ने एउटा बाटो अनि सिधै हिँड्ने अर्को । 'बाटो नछोडी हिँड्नु । दायाँ नलाग्नु,' दाइका कुरा मनमै गढेर बसिसकेको थियो । अब भने दोबाटो आइपुग्यो । हामी निर्धक्क बायाँको बाटोतर्फ हिँड्यो । भने झैं त्यो बाटो, बाटो जस्तो पटक्कै लाग्थेन । एकदमै भिरालो । एकअर्कालाई साहरा बनाउँदै त्यो बाटो पछाडि पार्‍यौं ।
कसैले पछाडिबाट झम्टिन आउँछ कि भनेर हेर्थ्यौं । झट्ट पछाडि फर्कँदा अगाडि बाटो छ कि छैन भन्ने मेसो नपाउने, मन त्यतिकै चिसो हुन्थ्यो ।
उकालो ओरालो हिँड्दै गयौं । कहिले जंगलले बीचमा गोरेटो भेटिन्थ्यो । कतै फेरि सिमेन्टकै भर्‍याङ । भिरमा खुट्टा उत्तिकै काँप्थे । उकालोमा हिँड्दा ताराहरु नजिकै आइपुगे जस्तो लाग्ने । हिँड्दै गर्दा सही बाटो कसरी पछ्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान हुन्थ्यो ।
आधा घण्टा अँध्यारोमा उकाली ओराली पार गरेपछि डाँडाको बत्ती हामीबाट लुक्यो । त्यसपछि दुवैको मुखबाट डरको स्वीकारोक्ति निस्कियो,'खोइ बत्ती, कतै हामी हराएनौं । बाटो बिरायौं कि ।' पाँच मिनेटको हिँडाइपछि फोहोर यता भन्ने बोर्ड रुखमा टाँसिएको भेटायौं । सही बाटोमा छौं भन्ने ढुक्कको लामो सास तान्यौं ।
४५ मिनेटको हिँडाइपछि पर अर्को डाँडाको पछिल्तिर एक धर्को राता किरण देखियो । आगोको ज्वाला झैं ठिक आकाशको फेदमा चम्किरहेको दृश्यले मन लोभ्यायो । लाग्यो,'कतै सूर्य उदाउन त सुरु भएन, हामी साँच्चिकै सनडाउनमै पुगिने हो त ?
मनको डर सूर्य उदाउनु अघिको त्यो सुन्दर दृश्यले भगाइदियो । थकान बिर्सियौं, स्वाँस्वाँ गर्दै गन्तव्यतर्फ छिटो छिटो पाइला चाल्यौं । हामी क्षितिजलाई बेहुली झैं रातो रंगले सजाएको गन्तव्यतर्फ बत्तियौं रफ्तारले । सूर्यको किरण देखिएको ठाउँबाट बेथानचोक नारायणथान पुग्न अगाडि ठूलो पहाड चढ्नुपर्ने भयो । उकालोमा स्वास अड्किएला झैं हुने । त्यहीमाथि चिसो सिरेटो । ३ हजार मिटरको उचाइमा पुगेर हामीले हाम्रो गन्तव्य भेट्यौँ । आँखा अगाडि सुन्तले रंग र रातो रंगको मिश्रित आनन्ददायी दृश्य । घाम उदाउन सुरु गर्दा हामी खुसीले चिच्यायौं । पहाडहरु हामी भन्दा साना देखिए । पहाडलाई तुँवालोले ढपक्कै ढाकेको दृश्य । प्रकृतिको यो सौन्दर्य एकसाथ हेरिरहँदा यात्रा भरीको डर र थकान क्षणभरमै गायब भए ।
सूर्यको किरण बिस्तारै हामीमाथि पर्न थाल्यो । बेथानचोकबाट देखिने विभिन्न हिमालका टुप्पा सुन जस्तै चम्कन थाले । सूर्य उदाउनुको अघिको त्यो अद्भूत आनन्दलाई भिडियोदेखि फोटाहरुमा क्याप्चर गर्‍यौं । आँखै अगाडि सूर्य लजाए झैं विस्तारै उदायो । त्यो आनन्दलाई मनमा कैद गरेर हामी पाँच घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै रिसोर्ट फर्क्यौं ।
बेथान चोकको किम्बदन्ती
मल्ल राजाको पालामा नारायण भक्तपुरको कोलाहल मन नपरेर बेथानचोकमा प्रतिस्थापित भएको किम्बदन्ती त्यहाँका बासिन्दामा प्रचलित रहेछ । पहिला ढुंगखर्कबासीले यो उचाइलाई नारायणथान भन्थे । तर अगार्निक रिसोर्टका सञ्चालक मध्येका एक रमन तिमिल्सिनाका अनुसार यो ठाउँको पूरानो नाम बेथानचोक नारायण नै हो । गाउँपालिकाको नाम बेथानचोक नारायण राखिएपछि अहिले सबैले यो ठाउँलाई बेथानचोक नारायण भन्दै आएका छन् ।
आफ्नो गाउँमा आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो यसरी बढ्लान् भनेर पहिला सोचेका थिएनन् रमनले । लकडाउनबीच पर्यटक आउने जाने क्रम बढ्यो । मिडियामा आइसकेपछि एक्सासी बेथानचोकको चर्चा चुलियो । त्यसपछि लकडाउनमै उनले अन्य दुई साथिसँग मिलेर त्यहाँ ' होलिडे इन' अर्गानिक रिसोर्ट खोल्ने सोचे । 'पहिला यस्तो चहलपहल हुन्थेन । लकडाउनमा चहलपहल बढ्यो । अनि हामीले रिसोर्ट खोल्ने सोच्यौं । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा पुग्ने,' रमनले सुनाए,'लकडाउनको प्रगति भन्नुपर्छ यो रिसोर्टलाई । छ वटा कोठा र एउटा ठूलो हलको बस्ने व्यवस्था छ ।'
साथी मदन तिमिल्सिना र प्रमोद तिमिल्सिना मिलेर उनले त्यहाँ रिसोर्ट खोलेका रहेछन् । भविष्यमा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढेमा आन्तरिक मात्र नभइ वैदेशिक पर्यटकलाई पनि बेथानचोकमा आकर्षित गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 'अहिले आन्तरिक पर्यटक मात्र आइरहेका छन् । व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्यौं भने अन्य पर्यटक पनि तान्न सकिन्छ । सोच त हाम्रो ठूलै छ । ८/१० वटा रिसोर्टहरु होस् यहाँ । पर्यटन विकासको लागि हामी अगाडि बढिरहन्छौं,' रमनले भने,'यहाँकै समितिले व्यवस्थापन मिलाउँदैछ सबै ।'
'ललितपुरबाट पनि नारायणथान देखिन्छ । सबै बेल्टबाट उचाइमा पर्छ यो ठाउँ,' लकडाउन अगाडि बोइज होस्टेल चलाएका रमनले सुनाए । उनको रिसोर्ट घटस्थापनादेखि खुलेको हो । अहिले धेरैजस्तो पर्यटक सम्पर्ककै आधारमा आउने गरेको उनी बताउँछन् । 'यहाँ रिसोर्ट खोलेर खुशी छौं । पर्यटक आउनुहुन्छ । डेढ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर खोलेको हो । अब थेग्नै नसक्ने पर्यटक आउनु भयो भने तनावै छ,' मुसुक्क हाँस्दै सुनाए ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १८:२४